नमस्ते – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०२:०७ English
नमस्ते गर्दा–गर्दा थाकिसकेको छ कृष्णे अचेल । उसलाई उचाल्दा–उचाल्दै आफ्नै हातको जोडनी पनि खिइसकेका होलान्जस्तो लाग्छ । पुलिसदेखि अफिसरसम्म, साधारण मसलेदेखि ठूलठूला व्यापारीसम्म, चिया व्यापारीदेखि ठूलठूला हुटेलवालासम्म, सामन्तदेखि उसका नोकरसम्म सबका–सबलाई ऊ नमस्ते गर्छ । उसका गाउँको मास्टर बाबुलाई समेत ऊ नमस्ते गर्न चुक्तैन । कहिले–काहीँ ऊ सोचविचार गर्छ —“उसलाई नमस्तेले के दिएको छ ? नमस्तेबाट उसले कसकसबाट के–के पाएको छ ? पुलिसले लात्तेभकुन्डो पारेकै छ । अफिसर साहेपले रामभेँडाजस्ता आँखाले उसलाई दागाधरेकै छन् । व्यापारी र हुटेलवालाले उसलाई पाँच पैसा पर्ने चीजलाई छ पैसा भनेकै छन् । मास्टर बाबुले उसको छोरोलाई फेल गरिदिएकै छन् ।”
कृष्णेको जीवन छोटकरीमा भन्ने हो भने आजसम्मको जीवननै नमस्तेको जीवन भने हुन्छ । उसले आफ्नो मेलो कहिल्यै ढुक्कसँग काम गरिरहन पाएन । नमस्ते गर्न बीचबीचमा अल्मलिनु प¥योप¥यो । उसले धानको धोक्रो सुमुसुमु साहूका घरसम्म पु¥याउन समेत पाएन । बाटामा दस–बीस चोटि नमस्ते गर्न अल्मलिनु प¥यो–प¥यो । उसले जुठा हातले, सफा हातले, फुर्सद—बेफुर्सद सबै समयमा जहिलेसुकै नमस्ते गर्नुपर्छ । नमस्ते गर्ने ड्युटीमा खटिएको मान्छेजस्तै सतर्कसाथ नमस्ते गर्नुपर्छ । त्यसैले कहिलेकहीँ कसैलाई नमस्ते गर्न चुक्यो भने ऊ आफूलाई ठूलो कर्तव्यबाट चुकेको भनेर ठूलो पछुताउमा पर्ने गर्छ । ऊ आफू आफ्नो महत्त्वपूर्ण कर्तव्यबाट उसले कहिल्यै सिन्कोबराबर पनि अधिकार प्राप्त गरेन । अधिकारप्राप्त नहुने कर्तव्य पूरागर्न चाहन्छ ऊ इमान्दारी बनेर सधैँ ।
बजारको छेउमा घर भैदिनु नै यो उसको निमित्त अभिसाफ हो । सानो बजार, थोरै हाकिम, थोरै व्यापारी, थोरै गण्यमान्य । पहिला–पहिला त सबैसँग चिन–जान गर्न ऊ तम्सन्थ्यो आफूसँगको कोसेली नमस्ते चढाएर, तर ‘बिटाका बिटा’ कोसेली खानेका सामू उसको नमस्तेको भाउ कतिन्जेल र कस्तो नै हुन्छ र ?
त्यसैले प्रत्येक पल्टको नमस्तेको ठीकअगाडि ऊ अचेल धर्म–सङ्कटमा पर्छ ।
‘नमस्ते–समस्ते नगर्ने अबदेखि ! नमस्ते गर्दा कतिले त फर्काउनसम्म फर्काउँदैनन् भने कतिले त उल्टो बिरालाले मुसी भेटेको ठान्दा रहेछन् । झन् कति त उनीहरूका जोरीपारिका सामुन्ने मैले नमस्ते गरिदिंदा मपाइँ बन्दारहेछन् !’– ऊ सोच्तछ, ‘फेरि नगर्दा पनि बाँच्न पाइएला र ? छोरालाई स्कुलमा पढाउन पाइएला र ?’ आफ्नो बाटाभरि तगारो देख्छ ऊ ।
‘कति बहादुर छ नमस्ते ? कति खतरा छ नमस्ते ?’ नमस्ते नगर्दा रिसायो भने नि ? डाक्टरले ओखती दिंदैन, कारिन्दाले काम गरिदिंदैन । कसरी बाँच्न सक्नु तगाराका कुकुरहरूका सामुन्ने ? उसको सोचाइ अलिक गहिराइतिर जान खोजेको हुन्छ ।
यस्तो नमस्तेको चेपमा परेको कृष्णे नराम्रो बिमारले पथारो परेको छ अचेल । ऊ बिमारले डाँडामा पुगेको जुनझैँ भएको छ । अब उसलाई बाँच्ने आशा छँदैछैन । उसले डाक्टरलाई बोलाउन पठाएको छ, महँगो फीस तिर्ने कबोल गरेर । डाक्टर फिस धुत्नलाई आउँदैछ औषधीको ब्याग बोकेर । कृष्णेले दोबाटैमा डाक्टरलाई आफ्नो घरतिर आउँदै गरेको देख्यो । ऊ फेरि धर्मसङ्कटमा प¥यो । “नमस्ते गरुँ–… … नगरुँ–… … गरुँ–… नगरुँ–… उसको सङ्कट त्यतित्यति ठूलो हुँदै गयो जतिजति डाक्टर नजिक हुँदै आयो । “मरिहालिन्छ, अब किन नमस्ते गर्नुप¥यो र ? मरेपछि त त्यसलाई नमस्ते नगरे पनि के बिग्रन्छ र ? …. तै बाँचिन्छ कि ? उससँग तै बचाउने शक्ति भएको औषधी छ कि ? … नमस्ते गरुँ कि ? …” उसको सङ्कट चरम विन्दुमा पुगिसक्यो । डाक्टर आइपुग्न लागिसक्यो । ऊ निदाएझैँ हुन कोशिस ग¥यो । बिउँझेझैँ हुँदा नमस्ते गरिहाल्नुपर्ला भनेर निदाएन । ऊ टोलाएको–टोलाएकै भयो । उसका मनमा सैयौँ द्वन्द्वहरूको संग्राम भयो । डाक्टर आइपुग्यो । कृष्णेले नमस्ते गरेन । आफूलाई बाँच्न नसक्ने नै उसले निधो गरेछ । ऊ चट्पटाउन लाग्दा डाक्टरले झन्डै नमस्ते फर्कायो । ऊ नियालिरहेको थियो । उसलाई ठूलो भूल गरेको जस्तो, डाक्टरको भयङ्कर अपमान गरेको जस्तो भान भयो । डाक्टर आएर नारी छाम्न खोज्दा उसले आफ्नो नारी भगायो । अब उसलाई डाक्टरले –‘कहीँ बिष त दिंदैन ?’ शङ्का भयो । औषधी–उपचार गरेर डाक्टर फर्कियो ।
अन्तिम घडीको मधौरु कृष्णे सिरानीमा टाउको अड्याएर दोबाटोमा आँखा लगाइरहेको थियो । जिल्ला कार्यालयको खरदार फिर्दै गरेको देख्यो । खरदार साहेबले पुलुक्क (नमस्ते मागेझैँगरी) कृष्णेतिर हेरे । कृष्णेलाई उनीतिरै हेरेर सुतिरहेको देखे । कृष्णे बिचरा ! नमस्ते गर्ने शक्ति नै थिएन, त्यसैले खरदारलाई नमस्ते गर्न चुक्यो । सधैँ नमस्ते गरिरहेको आज सकेन । आज उसलाई आफूले जीवनमा सबैभन्दा ठूलठूला पाप गरेको जस्तो ठूलठूला अपमान गरेको जस्तो लाग्यो । आफू निभ्न लागेको बत्तीले यस्तो अन्तिम घडीमा सन्तानको जरामा मल हालेर मर्नुपर्ने ! आफूले विष हालेको जस्तो लाग्यो । डाक्टरलाई नमस्ते गरेन । खरदारलाई नमस्ते गरेन । अब उसले आफू नबाँच्ने कुरा पनि थाहा पायो । उसका आँखा अललिन खोज्दै गरेको उसलाई थाहा छ, तर आज उसका पेटमा चिसो साप पस्यो । उसले सोच्यो –‘अब मेरा छोरालाई कसैले मुद्दा हाल्यो भने मेरो छोरो हार्छ । मेरा छोरालाई अन्याय हुन्छ । मेरो छोरो अब छेरौटीले पनि मर्न सक्छ । उसलाई डाक्टरले ओखती दिंदैन ।’
उसलाई डाक्टरलाई, खरदारलाई घरमै बोलाएर सैयौँचोटि नमस्ते गर्न मन लाग्यो । उसको मनमा अब छोरालाई के–के न हुने हो भन्ने मात्र लागिरह्यो । उसका ओठहरू चलेका जस्ता देखिए शायद उसको मुखबाट धेरै पश्चाताप पूर्ण रूपमा ‘नमस्ते ! नमस्ते !!… …. नमस्ते नमस्ते !! … भन्दै गर्दैछझैँ । उसको अनौठो चाला देखेर उसको छोरो, स्वास्नी भेला भए । रुन लागे । बिचरा कृष्णे ! आफूभित्रको हुटहुटीलाई मुखमा ल्याएर, जिन्दगीको आखिरीमा आएको शरीरको शक्तिलाई मुठ्ठी कसेर एकत्रित गर्दै जोडले चिच्यायो “नमस्ते डाक्टर साहेप … … न..म..स्ते … …. .. न .. म … स्ते … डाक्टर … सा… हे.. प न म स्ते … (डङ्ग्रङ लडेर) .ख … र … दा … र … सा … हे ……. !
द्वन्द र धुवा (कथा संग्रह ) बाट
३ चैत्र २०६८, शुक्रबार १५:१५ मा प्रकाशित